ETHIOPIA OO CELINAYSA QAXOOTI SOOMAAALIYEED:
War uu dhowaan soo saaray xafiiska nabadgalyada iyo socdaalka ee bariga ethiopia ayaa sheegay in todobaadkan dhamaadkiisa 3000 qaxooti soomaaliyeeda dibloogu celin doono soomaaliya.
Sida uu madaxa xafiiskaasi Tsegaye u sheegay saxaafadda ayaa waxaa ay dawlada ethiopia qorshaysatay in qaxootiyada ku sugan xerada HARTA SHEEKHA ee gobolka QABRI BAYAX dibloogu daadgurayndoono sadexda maalmood ee inagu soo aaddan Gobolada Woqooyiga soomaaliya.
Waxaa kaloo uu warku intaas raacinayaa in diiwaan galintooda lagu guda jiro illaa 6000 oo kale oo lagu talajiro in dhamaadka bisha AUGOSTO dib iyagana loo celiyo.
illaa 25,000 qof ayaa kutalagalku yahay in iyagana lagu gabagabeeyo celintooda illaa dhamaadka sanadkan.
Waxaa lagu qiyaasay haatan in ay ku suganyihiin 37,000 qaxootiya xerooyinka DEGMADA QABRI-BAYAX, HARTA SHEEKHA, IYO CAAYISHA ee ismaamulka dhulka soomaalida ethiopia.
Dhinaca kale war lagu faafiyay saxaafada Dawlad goboleedka somaliland ee woqooyiga soomaaliya ayaa tibaaxaya in ay golaha wakiilada soomaaliland ugu yeedheen in ay hortimaaddo wasiirka arimaha dibadda marwo Ednna Aadan Ismaaciil si ay faahfaahin uga bixiso Heshiis uu maamulka somaliland kulagalay dawladda Ingiriiska dhowaan, kaasoo dhigaya in Britain uu dib u soo celiyo qaxootiga ku dhashay gobolada woqooyiga soomaaliya ee aan sharciga degenaanshaha ka helin dalka ingiriiska iyo waliba kuwa denbiyada ka gala dalka Britain.
XIRIIRKII U DHEXAYN JIREY SSDF & SNM CAYNKEE BUU AHAA?.... GUJI:
Waxaa ay marwo Edna Aadan Ismaaciil sabab uga dhigtay in ay heshiiskaasi sexeexdo iyadoo ka hortaygaysa Denbiyada ay galeen Soomaalida kale "waxaa ay dadkaasi inta dunuub ka galaan wadamada shisheeyaha ah ay dabadeed sheegtaan soomaaliland taasoo fashilmaysa ceebtiina soomaaliland ka wareegaysa marka la yiraa waxaa laydunku celin somaliland" ayay tiri marwadu.
Waxaa kaloo ay ku macnaysay wasiiraddu sababta ay u ogolaatay in ay heshiiskaas dib u soocelinta ah sexeexdo "waxaannu ku jiraa xod-xodasho aannu ka shukaansanaynno caalamka in ay na aqoonsadaan,sidaas daraadeed ay marka hore somaliland waajib ku tahay in ay fuliso tixgalisana xeerarka dawladaha danuhu naga dhexeeyaan.
Qore: Xagar Yare
SomaliTalk Germany | August 2, 2003
QORAALADII HORE EE XAGAR YARE.... Guji
SSDF & SNM XIRIIRKOODII...... GUJI: